मन्त्रीको टुंगो, मन्त्रालय बाँकी
३० असार । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जाने मन्त्रीको नामावली टुंग्याएको छ । कांग्रेससंग मन्त्रालयमा भागबन्डा हुनेबित्तिकै महेन्द्रबहादुर शाहीलाई उर्जा मन्त्रालय दिने भनिए पनि अन्य नेताको मन्त्रालय भने टुंग्याउन सकिएको छैन । ‘पार्टीले लगभग नाम टुंग्याएको भए पनि मन्त्रालय टुंगिन नसकेकाले जिम्म..
ट्रम्पविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
३० असार । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध उक सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेक..
हारपछि माओवादीहरु के गर्दैछन् ?
३० असार । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएको माओवादीदेखि अझै क्रान्ति आवश्यकु रहेको भन्दै अघि..
चक्रपथ निर्माणमा यस्तो अवरोध
३० असार । राष्ट्रिय महत्ववको आयोजनाका रूपमा रहेको बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा अवरोध उत्पन्न भ..
भीआइपीलाई सुरक्षा थ्रेट भएकै हो ?
३० असार । मुलुकका उराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्रै होइनन् हरेक मन्त्रीसमेत..
शर्मासहित तीन जनालाई ११ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप
३० असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित तीन जनालाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरे पनि फाइल अध्ययन बाँकी रहेको भन्दै शुक्रबारलाई सरेको छ । सर्वोच्च अदालतले शर्मालाई आफूसमक्ष उपस्थित गराउन तोकेभन्दा एक दिनअघ..
स्थानीय तहमा ५९ वटा कानुन आवश्यक
३० असार । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पूर्ण सक्रिय बनाउन तत्काल कम्तीमा ५९ वटा कानुन, नियमावली तथा निर्देशिका बनाउनुपर्ने बताएको छ । तर, अभ्यासको क्रममा त्यस्ता कानुनको संख्या बढ्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्थानीय तहका लागि १७ वटा निर्देशिका, आदेश, कार्यविधि र ऐन बनाएको छ । ..
३० असार । निर्वाचन आयोगले आगामी २ असोजमा हुने प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री १४ असारमै जिल्ला पुर्याइसकेकाले कार्यालय सञ्चालन र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गर्ने काम मात्रै बाँकी छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र मतदानका क्रममा आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्ने र..
३० असार । स्थानीय तह निर्वाचनमा प्युठान गौमुखी गाउँपालिका–३ ढाँडाखानी रजवारा प्युठानकी तुल्सी सुनारको म्यादी प्रहरी बन्ने सपना थियो । आफूसहित गाउँका चारजना साथीसँगै उहाँ म्यादीका लागि साविकको सदरमुकाम खलंगा पुगेर फाराम भर्नुभयो । स्वास्थ्य परीक्षण, शारीरिक तन्दुरुस्त (दौड, पुसअप, सिटअप) र लिखित परीक्षामा समेत उहाँ उत्र्तीण हुनुभ..
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध उजुरी परेन
३० असार। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उजुरी आह्वान गरेको १० दिनको समय सीमामा एउटा पनि उजुरी दर्ता भएन । समिति सचिवालयका अनुसार उजुरी दिने अन्तिम दिन बुधबारसम्म कुनै पनि माध्यमबाट पराजुलीविरुद्ध उजुरी नपरेको हो । समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइअघि सर्वसाधारणसँग समेत उज..
राप्रपालाई तत्काल सरकारमा नल्याइने
२९ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राप्रपाका लागि चार मन्त्रालय छुट्याए पनि उसलाई तत्काल सरकारमा नल्याउने भएका छन् । अबको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिककै मन्त्रीहरू मात्र हुने स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विदेशबाट फर्केलगत..
२९ असार । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्न विलम्ब भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुले क्षेत्र निर्धारणको झन्झट भन्दा हालकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने इच्छा प्रकट गरेका छन् । साँच्चै त्यसो गरिएमा देशमा सांसदहरुको सख्या मात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ । प्रधानमन्त्री निवासमा भएको मंगलबारको बैठकमा औपचा..
किन जान चाहँदैनन् स्थानीय तहमा बैंक ?
२९ असार । देशका १ सय ६२ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न वाणिज्य बैंकहरू अनिच्छुक देखिएका छन् । पूर्वाधार अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरू ४९ जिल्लाका एक नगरपालिका र १ सय ६१ गाउँपालिकामा शाखा खोल्न तयार नभएका हुन् । ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३ सय ३२ मा मात्रै ‘क’ वर्गका बैंक पुगेका छन् । त्यसमध्ये २ […]
मुख्य सचिव-राजीनामा नदिई एडीबीको जागिरमा !
२९ असार । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी निवृत्तिभरण पेन्सन बढाउनका लागि राजीनामै नदिईकन एसियाली विकास बैंक एडीबी को बैकल्पिक कार्याकारी निर्देशन पदमा जागिर खान लागेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार निजामती प्रशासनकै नेतृत्व गरिरहेका सुवेदीले थप ३ बर्ष सेवा गरे बराबरको पेन्सन् बढाउने लोभमा आफ्नो पद..
समायोजन विधेयक संशोधनका लागि अनुमोदन
२९ असार । कर्मचारी समायोजन विधेयक संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भएको छ । विधेयकका प्रावधान विभेदकारी भएको भन्दै कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिले आवाज उठाइरहेका बेला विधेयक संशोधनको महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो । अधिकांश सांसदले समेत विधेयकका प्रावधान सच्याइनुपर्ने माग सैद्धान्तिक छलफलमा उठाउनुभयो । असार २५ गते संसद्मा पेस..
रानीबारी हत्याकाण्डका दोषीलाई जन्मकैद
२९ असार । जिल्ला अदालत काठमाडौँले रानीबारी हत्याकाण्डका दुई अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश डा. रमेशप्रसाद रिजालको एकल इजलासले हत्यामा संलग्न भएको ठहर गर्दै दोलखा गौरीशङ्कर गाउँपालिकाका मनराज गुरुङ र रामेछाप फुलासीका प्रमेश चौहानलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको हो । झण्डै १५ वर्ष..
राजपा चुनावमा भाग लिने सङ्केत
२९ असार । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने सङ्केत गरेको छ । राजपाले तत्काल संविधान संशोधन नभए पनि आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता, पक्राउ परेकाको रिहाइ, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र अपाङ्गता भएकाको व्यवस्थापन तथा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप भए चुनावमा भाग लिने सङ्केत गरेको हो । प्..
२९ असार । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०४औँ जन्मजयन्ती (भानुजयन्ती) विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ । १८७१ साल असार २९ गते तनहुँमा जन्मनुभएका आदिकविको स्मृतिमा हरेक वर्ष देश–विदेशमा विविध साहित्यिक कार्यक्रमसाथ भानु जयन्ती मनाइँदै आएको छ । रामायण बालकाण्ड, प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, वधुशिक्षा रामगीता र रामायण लगायत उहाँका थुपै्र ने..
२९ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार (१ साउनमा) मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । शनिबारसम्म मन्त्रीको टुंगो लगाउने र आइतबार विस्तार गर्ने सहमति सत्तासाझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको छ । ‘माओवादी अध्यक्ष शुक्रबार नेपाल फर्केपछि शनिबार दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँड टुंग्याएर आइतबार मन्त्रिपरिषद् वि..
३६ वर्ष पुरानो पाँचतारे होटेल एभरेस्ट २५ महिनादेखि बन्द
२९ असार । काठमाडौं सहरमा ठुल्ठूला होटेल बनिरहेका र बन्ने घोषणा भइरहेका बेला ३६ वर्ष पुरानो पाँचतारे होटेल एभरेस्ट २५ महिनादेखि बन्द छ। भूकम्पका कारण क्षतीग्रस्त भई बन्द भएको भनिएको होटेल भवनको मर्मतको काम सुरु भएको छैन। ११ जना सुरक्षा गार्डको भरमा एभरेस्ट होटेल अलपत्र छ। भूकम्पपछि हरियो स्टिकर लगाइदिएर पुनःसञ्चालनमा आइसकेको होटे..
सबै दल अन्तर्घातको पीडामा
२८ असार । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाका ९ वडामा कांग्रेसका बागी उम्मेदवार खडा भए । मेयरमा कांग्रेस डिल्लीराज जोशी १२८ मतले पराजित भए । वडा नम्बर ४ र ५ मा कांग्रेस वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मतको आधा पनि मेयरका उम्मेदवारले पाएनन् । अजेयमेरुमा विद्रोहीको धेरै भोट डडेल्धुराकै अजयमेरु गा..
थकाईदेखि अनुभवको कमिसम्मले पराजय
२८ असार । माओवादी केन्द्रका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन नसक्नुमा अति आत्मविश्वास, गुटस्वार्थ, व्यक्तिवाद, पार्टीभित्रकै अन्तरघात र निर्वाचन अनुभवको कमी मूल कारण रहेको बताएका छन् ।कतिपय स्थान जितिनेमा अति विश्वास (ओभर कन्फिडेन्स) का कारण पनि पार्टी पराजित हुन पुगेको नेताहरूले जिकिर गरेका छन् ..
संशोधन संसद्को चुनावपछि मात्रै
२८ असार । सत्तापक्षको पूर्वप्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख विपक्षी एमालेले अडान लिएपछि संविधान संशोधन विधेयक संसद्को चुनावपछि मात्र अघि बढाउन सत्तापक्ष ‘लचक’ देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान बसेको तीन दलको बैठकमा प्रमुख विपक्षी एमालेले चुनावपछि मात्र संशोधन विधेयक अघि बढाउने भन्ने सत्तापक्षका..
२८ असार । प्लास्टिकको चामल विक्री गरेको आरोपमा प्रहरीले राजधानीबाट एक ब्यापारीलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले सानो भर्याङबाट शेरचन प्रदर्श प्रालिका टंकप्रसाद शेरचनलाई पक्राउ गरेको हो । शेरचनले विक्री गरेको आरटिशी ब्राण्डको चामल प्लास्टिकको भएको आशंकमा महानागरीय प्रहरी परिसले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको छ । नागरिकमा खबर ..
मिटरब्याजका कारण महिला बिचल्लीमा
२८ असार । धनगढीमा मिटरब्याजका कारणबाट बिचल्लीमा पर्ने महिलाको संख्या बढ्दै गएको छ । बढी ब्याज पाइने लोभ्का कारण मिटर ब्याजमा पैसाको कारोबार गर्ने तर चर्को मिटर ब्याजका कारण पैसा असुली हुन नसकेपछि घरबारविहीन हुनुका साथै रातारात धनगढी नै छाडेर भाग्नेहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यसमा सानो आर्थिक कारोबार गर्ने मजदुरदेखि ठूला धनाढ..
बजेट सक्न को-को जाँदैछन् विदेश ?
२८ असार । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा दाताको ऋण, अनुदान र राज्यकोषबाट करौडौं खर्चदै विभिन्न मन्त्रालयका सयौँ उच्च अधिकारी विदेश सयर गरिरहेका छन् । विपन्नको हितमा खर्चनुपर्ने रकम दुरपयोग गर्दै कतिपय अधिकारी अहिले विदेशमा घुमफिर गरिरहेका छन् भने कति फर्किईसकेका छन् । कतिपय जाने तयारीमै छन् । बेरोजगार युवालाई सीपमुलक तालिम प्रदन गरी स्व..
नियमावली विपरीत एआइजीको दरबन्दी थप
२८ असार । सरकारले प्रहरी नियमावलीविपरीत अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को दरबन्दी बढाएको छ । संगठनको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिको इच्छा पूरा गर्न एआइजीको दरबन्दी थप गरिँदा नियम मिचिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रहरीमा एआइजीको संख्या ११ राख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीमा कुनै पनि पद थप गर्दा व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्..
माओवादी केन्द्र चुनावमा हार्नुका पाँच कारण छन् : प्रचण्ड
२८ असार । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा सीमित भएपछि हारको कारण खोजी गर्न थालेका छन् । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, उज्यालो नेपाल आर्थिक बृद्धिदरलगायतका राम्रो काम गरेर पनि जनता समक्ष पुर्याउन नसक्नु हारको पहिलो कराण भएको माओवादी केन्द्रले निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीले अपेक्षा गरे अनुसारको नतिजा ल्याउन ..
देउवाको ध्यान अब सरकार विस्तारमा
२८ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन असार मसान्तसम्म टुंग्याएर साउनको पहिलो साता सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, संशोधनमा दुई तिहाइ नपुग्ने छनक देखिएपछि उनी सरकार विस्तारतर्फ केन्द्रित भएका छन् । सरकार विस्तारका लागि आन्तरिक छलफल गर्ने र केही दिनभिै मन्त्री थप गर्ने सोचमा देउवा पुगेको उनी निकट स्रोत..
अब मतगणनामा एक जनामात्र प्रतिनिधि
२८असार । निर्वाचनको मतगणना भइरहेको स्थानमा अब निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारीबाहेक राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवारको एक मात्र प्रतिनिधिले प्रवेश पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा उम्मेदवार वा निजले तोकेको एक जना प्रतिनिधि मात्र मतगणना स्थानमा जान पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि यो अवस्था आएको हो । यसअघि निर्व..